Okufanele ukwazi mayelana nenzuzo Threshold kanye ne-Deadlock | Ezezimali Zomnotho
Impela sesivele sezwa ngakho Umkhawulo wenzuzo nezingqinamba zezinkampani noma zamabhizinisi Kepha kuyini ukuhlukana noma ukuvinjelwa? Kususelwa kuphi? Ingabe ibaluleke ngempela enkampanini? Ingabalwa kanjani? Yenzelwe ini? Kufanele ngikwenze ngasiphi isikhathi? Kuwo wonke lo mbhalo sizochaza ngesinyathelo ngesinyathelo ukubaluleka kwalokhu kubalwa, ukuthi kulula kangakanani kanye nezinzuzo okuletha ezinkampanini noma kumabhizinisi.
Konke ngendlela eqondakalayo futhi ngaphandle kokubambeka okungaka ukuze kube lula ukuyiqonda nokwenza, ikakhulukazi kubantu abasanda kuqala noma abahlose ukuqala inkampani noma ibhizinisi.
Ngakho-ke ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado ake siqale qonda leli gama elisetshenziswa kabanzi nokubalwa futhi inenzuzo ezinkampanini.
Ezinkampanini eziningi, noma ngabe zincane noma ziphakathi nendawo, kunqunywa intengo esebenzisa i- ukubalwa kwemikhiqizo esitokweni futhi okuzothengiswa, ngalokhu, izindleko ezenziwe zakhokhwa, okungukuthi, lokho okwakutshaliwe phambilini yilokhu okubizwa ngokuthi ukuvimbela noma ukuphula umthetho; Ngamanye amagama, yinani lokuthengiswa okwenziwe nokuthi ngale ndlela kwakungekho ukulahleka noma inzuzo, okungukuthi, lokho okwakutshaliwe kwakutholakala nje.
Isiphetho noma iphuzu lokuqhekeka Ngaleso sikhathi yisamba salokho okufakile noma iphesenti lokuthengisa elilingana nenani lenani elinqunyiwe; Ngaphezulu kwaleyo mali, le mali engenayo izofaka inani elinqunyelwe futhi enye izonikeza izinzuzo ngendlela efanayo uma zingaphansi kuzoholela ekulahlekelweni kwemali etshaliwe.
1 KUSHO UKUTHINI UKUTHI IZINZUZO KANYE NOKUFA KOKUFA?
2 YINI IZINZUZO NOMA IZINZUZO ZAKHO?
3 IMIKHAWULO YENZUZO ETHOLA ISIKHATHI NOMA IPHUZU LOKUFA:
4 Ngingayibala kanjani inzuzo / iphuzu lokufa elilandelwayo?
5 Izintengo zezinto ezithengiswayo.
KUSHO UKUTHINI UKUTHI IZINZUZO KANYE NOKUFA KOKUFA?
Leli gama lisetshenziswa kakhulu kwezomnotho umkhawulo wenzuzo, iphuzu lokungathathi hlangothi noma lekhefu Kususelwa kwisichasiso sayo esiNgisini i-BEP (Break Even Point) futhi ngamagama alula ukuthi ubuncane besilinganiso esithengiswe ngamayunithi enkampanini yethu ukuphetha ngenzuzo ka-zero. Ngamanye amagama, kulapho inani eliphelele elisetshenzisiwe lifana nemali engenayo ephelele kulokho okuthengisiwe.
Ngale mali engenayo ephansi ye- ubuncane bokuthengisa nokukhiqiza kuzoba umkhiqizo ozuzisa ibhizinisi, inqobo nje uma yonke into ekhiqizwayo ithengiswa; ngoba uma kukhona umkhiqizo kodwa kungathengiswa, kusobala ukuthi ngeke kube khona imali engenayo yebhizinisi noma yenkampani; Ngamanye amagama, kuzoba nezindleko zokugcina kuphela.
Ukuhlukanisa inkampani enenzuzo noma engenzi nzuzo, kumele kuhlaziywe inani lemikhiqizo eliyithengisayo nokuthi ngabe konke kuyasiza yini ukuhlinzeka okuhle ngokuhlukahluka kwephothifoliyo yomkhiqizo ekhiqiziwe. Ngakolunye uhlangothi, uma icala lenkampani kungukuhluzwa kwencwadi eyodwa kuphela noma umkhiqizo, kuphethwa ngokuthi kufinyelelwe iphuzu lokuphumula noma ukuvinjelwa.
Ngamanye amagama ukuqonda kangcono; umkhawulo wenzuzo noma ukuphela okufile kungubuningi bemikhiqizo noma izinsizakalo ukuthi kufanele sithengise ukuze sikwazi ukukhokha zonke izindleko zethu ezihleliwe noma eziguquguqukayo esizitshala ukwenza lo mkhiqizo ukuthengisa. Okuchazwe ngenye indlela ukuthi lowo mkhawulo lapho siqala khona ukubuyisa lokho obekutshalwe ebhizinisini bese siqala ukukhiqiza imali ngemikhiqizo yethu.
YINI IZINZUZO NOMA IZINZUZO ZAKHO?
Enye ye Izinzuzo zephuzu lokuphumula noma lokunqanda ukunikezela imibiko enkampanini mayelana noma ngebhizinisi ngobungozi noma ubungozi lokho kutholakala ngokuhluka kwenani lokukhiqiza; Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukunikeza isithombe esibanzi nesicacile semiphumela eyenzeka ekukhuleni kwenani elinqunyelwe; Ngaphezu kwalokho, kuyasisiza ukunquma ushintsho oluzokwenziwa ngezinzuzo ezinkulu, njengokunyuka kwentengo noma izindleko emikhiqizweni eyenziwe.
IMIKHAWULO YENZUZO ETHOLA ISIKHATHI NOMA IPHUZU LOKUFA:
Ukufezeka kokuthengisa akuhambisani, ngakho-ke lapho umuntu ehlupheka komunye nomunye, lokhu kuzothinta izinga lalokhu okuvele kukhona.
Ubuningi bezinto ezithengisiwe buzohlala buncike enanini lentengo.
Inani eliguquguqukayo lingakhuphuka noma lehle, ngakho-ke kufanele lihlukaniswe ngokuya ngesikhathi esihleliwe.
Uma inani lokukhiqiza likhulu, izindleko ngeke zihlale zingaguquguquki futhi zizokwenyuka.
Ngingayibala kanjani inzuzo / iphuzu lokufa elilandelwayo?
Ukubala ukuvinjelwa noma umkhawulo wenzuzo, kudingeka amaphuzu ayi-3 kuphela mayelana nenkampani yethu:
1. Inani eliphelele lenkampani yethu noma ibhizinisi.
2. Izintengo zezinto ezithengiswayo.
3. Inani eliguqukayo leyunithi ngayinye selivele lithengisiwe.
Inani eliphelele lenkampani yethu noma ibhizinisi.
El Inani elinqunyiwe noma inani yilokho kwakho konke okuzotshalwa noma kuzokhokhwa Ngakho-ke kuyadingeka ekulungisweni kwemikhiqizo ozoyithengisa, njengokuqashwa kwempahla, ukukhokhelwa kwabasebenzi, ugesi, ucingo, izinkampani zomshuwalense, ezokuthutha, uphethiloli wezokuthutha, njll. Kubalulekile ukucabangela ngayinye yazo ukuze ulinganisele inani elinqunyelwe kahle.
Izintengo zezinto ezithengiswayo.
Elinye inani eliguqukayo noma inani yi- Intengo yokuthengisa uma uthengisa umkhiqizo owodwa kuphela kulula ngoba kuzodingeka ukuthi usungule eyodwa kuphela. Kepha imvamisa amanani ahlukile aphathwa entweni ngayinye noma kumkhiqizo, obizwa ngenani lentengo elijwayelekile; kepha ngakolunye uhlangothi, uma inkampani yakho isivele inkulu futhi isungulwe futhi inemikhiqizo eminingi nezethulo zalokhu, lapho-ke sikhuluma nge ukuphuka noma ukuvimbela futhi ukubalwa kufanele kwenziwe kulayini ngamunye webhizinisi.
Inani eliguqukayo leyunithi ngayinye selivele lithengisiwe.
Iphuzu lokugcina esilidingayo inani eliguqukayo leyunithi ngayinye noma izindleko eziguqukayo ezijwayelekile lapha kufaka konke okusetshenzisiwe ebhizinisini, impahla eluhlaza ukwenza umkhiqizo noma imikhiqizo ekhiqizwayo futhi kuya ngobungako obenziwe kulokhu, kuba ngoba Lokhu kubalwa njengezindleko eziguquguqukayo ngoba kuzoncika ebuningini obuzokwenziwa, okungukuthi, uma senza okuningi, inani lizoba likhulu, kepha uma senza okuncane, inani lizoba lincane, noma ngabe umkhiqizo yehliswe noma inyuswe; umphumela wakho konke lokhu kubalwa kuzoba iphuzu lesithathu lesithathu. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi lokhu kubalwa kuzokwenziwa ngaphandle kogesi, amaholo, umshuwalense, ukuqashwa kwendawo nakho konke osekuvele kuphawulwe ephuzwini lokuqala esikubeka njengezindleko ezihleliwe.
Ukuthola umugqa weminikelo kumele senze ukubala okulandelayo:
Susa intengo yento oyithengisayo, khipha, inani eliguqukayo leyunithi ngayinye.
Ukubalwa kombundu wenzuzo noma isikhungo esifile.
Ukwenza ukubalwa komkhawulo wenzuzo noma isikhungo esifile kufanele senze ukwahlukana, inani eliphelele phakathi komugqa weminikelo yeyunithi ochazwe ngenhla; okungukuthi:
Ukuhlukanisa inani eliphelele ngemajini yomnikelo weyunithi kuzoholela emkhawulweni wenzuzo.
Lokhu kuzoba iphuzu ozoqala ngalo ukwenza inzuzo.
Lo mphumela uzoba umkhawulo wenzuzo noma ukuvinjelwa okufanele sikwenze inyanga ngayinye, unyaka noma usuku, (njengoba kunethezekile noma kufanele inkampani) ukuze uqale ngenzuzo noma izinzuzo ngoba sizokwazi ngokuqinisekile inani eliphelele kanye nenani eliguqukayo leyunithi ngayinye ethengisiwe, okuzosinika ukulawula nokuhleleka unezinzuzo ezinkulu.
Lokhu kubalwa kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ukwenziwa; Ngakho-ke uma unenhloso yokusungula ibhizinisi noma inkampani kuzobaluleke kakhulu ukwenza kanjalo, ngale ndlela ungasetha izindawo zokuthengisa ukuze ukwazi ukufeza lo mkhawulo wenzuzo ngokushesha okukhulu futhi kuzoba ngomunye wabakhulu kunabo bonke kubalulekile ukuthi usungule kufayela le- uhlelo lokuphila okufanele uyethule ebhange.
Ifomula okuchazwe ngenhla kwenziwa ngayo yile elandelayo:
I-Qc = CF / (PVu - Cvu)
Qc = Umkhawulo wenzuzo noma ukuvinjelwa, okuyinombolo yamayunithi enziwe futhi athengiswa ukuholela ekuzuzeni okungatheni.
I-CF = izindleko ezihleliwe noma inani eliphelele.
PVu = Intengo yokuthengiswa kweyunithi.
I-CVT = Izindleko eziguqukayo sezizonke.
I-CVu = Izindleko eziguquguqukayo zeyunithi.
B ° = Izinzuzo.
Mina = Imali.
C = Izindleko eziphelele.
Ngendlela elula nangolimi olucacile sichaze ukuthi yini i- Break-even point and deadlock for izinkampani noma amabhizinisi nenzuzo yabo. Ngakho-ke kumane nje kuyindaba yokuhlela, ukuhlela nokubikezela zonke izindleko ezenziwe enkampanini noma ebhizinisini, nokugcina irekhodi lazo ukuze ukwazi ukulibala nsuku zonke, ngeviki, ngenyanga noma ngonyaka ngokuya ngezidingo ( yize kungakuhle ukwenze njalo ngenyanga).
Siyethemba ukuthi le ndatshana ibilokhu isithandwa sakho futhi isiza
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » Osomabhizinisi » Umkhawulo Wenzuzo kanye Nesinqubomgomo
Imithetho eyisisekelo yokutshala imali
Ukubuyekezwa kwebhange laseYurophu, ukuthenga ithuba?